विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १४ करोड ४४ लाख, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ? – हाम्रो देश
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १४ करोड ४४ लाख, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ?
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १४ करोड ४४ लाख ३१ हजार ८सय ६९ पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३० लाख ७१ हजार ६ सय २५ पुगेको छ ।
त्यस्तै हालसम्म विश्वमा १२ करोड २६ लाख ६ हजार २ सय ३७ कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भइसकेका छन् । त्यस्तै अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट ५ लाख ८३ हजार ३ सय ३० जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ३ करोड २६ लाख २ हजार ५१ पुगेको छ ।
त्यस्तै ब्रजिलमा कोरोनाको संक्रमणबाट मुत्यु हुनेको संख्या ३ लाख ८१ हजार ६ सय ८७ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या १ करोड ४१ लाख २२ हजार ७ सय ९५ पुगेको छ ।